हाम्रा लागि रोगको महामारी भन्दा भोकमरीको चिन्ता ,सरकार लकडाउनको विकल्प खोज
म हाल सानोतिनो व्यवसाय गर्दै जिबिकोपर्जन गर्दै आएको युवा हुँ । यहि क्रममा विश्वका धेरै मुलुकमा एक महामारीले आक्रन्त बनाई रहेका बेला नेपालमा पनि चैत्र ११ गते लकडाउन शुरु भएको सबैलाइ जानकारी नै छ । बीचमा केही खुकुलो बनाउने निर्णय भएसंगै नेपालमा कोरोना संक्रमण संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ । ज्यान गुमाउने नागरिकहरुको संख्यामा पनि बृद्धि भइरहेकै छ । लामो लकडाउनका कारण आर्थिक कारोवार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । नेपालमै केही गरौं भन्ने सोचाइका साथ व्यपार व्यवसमा लागेका हामी जस्ता युवाहरुमा निरासता छाएको छ ।
लकडाउन मात्रै कोरोना पराजित गर्ने अन्तिम विकल्प होइन् । यस्तो अवस्थामा कोरोनाबाट बच्चदै नागरिकले गरि खाने बाटो सृजना गर्नका लागि राज्यले बैकल्प नखोज्नु विडम्वना हो । मसान्त लागेपछि घरभित्र बसेरैपनि बैंकको ब्याज सहित बन्द सटरको भाडा जबर्जस्ति तिर्नुपर्ने पिडा झेल्नुपरेको छ, हामी व्यवसायीहरुले । युवा व्यवसायीहरुको त यस्तो पिडा छ भने दैनिक काम गरेर छाँक टार्ने मजदुरहरुको हालत के होला ? निमुखा र गरिब जनताको हालत के होला ? सरकारले लकडाउन जारी गर्दा जनताको सुरक्षा देखावटी मात्र भैरहेको भान हुदैछ,, किन भने नेपाल मा १ जना पनि कोरोना संक्रमित नदेखिदा तत्कालै लकडाउन जारिगरेको थियो । अहिले लकडाउन भएपनि संक्रमित संख्या कति पुग्यो त्यो भन्न पर्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन ।
यो लकडाउन गर्ने निति फेल छ भन्ने कि नभन्ने ? त्यसैंले यो सरकारले बैकं कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाएर सटर भाडा मिनाह गरि जनताको घर घरमा रासन पुर्याउने काम गरी सबैलाइ घर भित्रै राख्ने व्यबस्था गर्नु पर्छ । अबका दिनमा हामी जनता लकडाउनको पालना नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छौ। लकडाउनको निरन्तरता कारण अब भोक भोकै परी मर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रा लागि अब कोरोना ठूलो कुरा भएन, अब कसरी हुन्छ २ छाँक खाएर जीवन बचाउने भन्ने नै ठूलो कुरा भएको छ ।
हामिलाई भाइरस को चिन्ता भन्दा बिहान बेलुकाको छाँक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले दिनरात सताइ रहेको छ । त्यसकारण सरकारलाई तत्काल लकडाउनको विकल्प खोज्न जरुरी छ । कि त सबै नागरिकलाइ लकडाउन अवधिभर खान पुग्ने गरि रासन दिउानु पर्छ । नभए, अब जनताले लकडाउन मान्ने छैनन् । जसकारण वर्तमान सरकारप्रति जनताको आड भरोसा टुट्ने छ । त्यो मात्रै हैन, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी प्रति पनि आम जनताको विश्वास घट्ने छ । फलस्वरुप त्यसको नोक्सान आगामी दिनमा सोही पार्टीलाई हुने छ ।
अमित याक्खा राई, ईटहरी